Sahityabatika: सरकार चाहनेहरु
के संविधान बनाउलान र सरकार चाहनेहरु
दिनदिनै यो देशमा काटमार चाहनेहरु
कोही छन् बामपन्थी त कोही दक्षिणपन्थी
आफ्नै आफ्नै पार्टीको बिचार चाहनेहरु
जनता भने शास्ती र दुःख मात्रै खेप्न बाध्य
पार्टीभित्र आफ्नो प्रचार चाहनेहरु
कोही बस्छन् प्रतिपक्ष कोही सरकारमा
हु“दैनन् साना कोही हार चाहनेहरु
सहमति र सहकार्य गरेपनि त हुन्थ्यो
सोच्दैनन् देशको बारेमा आफ्नो संसार चाहनेहरु
‘निश्चल झनक अधिकारी बारुद’
अछाम सेरा–१, फल्टाने सुन्दरबस्ती
हाल – कलेज अफ अलाइड हेल्थ साइन्स, नेपालगञ्ज
Bed Nath Pulami March 18, 2011 at 2:20 AM
खै कहिल्यौ भने जस्तो नहुने भो देशमा !
अधिकारी जी धन्यबाद यहाको कलम लाइ -यहाँको शब्दहरुको लागि !
Nepaligirls March 18, 2011 at 11:14 AM
बेदनाथ सरले भन्नु भएको कुरा एकदमै सहि हो । देश र जनताकोलागी केही गर्छु भन्नेहरुको नाटक देखेर आजभोली त वाक्कदिक्क लागेर आउँछ । के गर्ने जुन जोगी आएपनि खै के भन्थे त्यस्तै भा छ । पहिले पहिले कहिँ नभाको जात्रा खै के मा भन्थे अब त कहिँ नभाको जात्रा संसदभवनमा भन्नु पर्ने बेला आइसक्यो ।